डकैती सिकाउने साहित्य र सुपर हिट फिल्म | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट प्रकाशित २७ बैशाख २०७८ ००:०१
केही समयअघि स्पेनमा बनेको टेलिभिजन शृंखला ‘मनी हेइस्ट’ निकै हिट भएको थियो । पश्चिमा देशमा डकैतीका सिनेमा वा टेलिभिजन शृंखला निकै रूचाइन्छन् तर जति पनि सुपरहिट फिल्म वा शृंखला बनेका छन्, ती प्रायः किताबमा आधारित भएरै बनाइएका छन् ।
यतिबेला नेपालको अधिकांश ठाउँमा बन्दाबन्दी छ । सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र हामीमध्ये अधिकांश घरैमा बस्न बाध्य छौँ । यस्तो बेलामा साहित्यमा आधारित हेइस्ट मुभीका बारेमा जानकारी पाउनु रोचक नै हुनसक्छ ताकि ती किताब पढ्न अल्छी लागेका खण्डमा पनि फिल्म खोजीखोजी हेर्न सजिलो होस् ।
अच्छा, एउटा कुरा- तपाईं हेइस्ट मुभीको फ्यान हो भने चोरीका कुरामा रूचि भएजस्तो कसैले मान्लान् तर मनोरञ्जन लिन चाहँदा कसैले केमा कसैले चोरी डकैतीमा पनि पाउन सक्छन् । तपाईं आदर्शवादी हो भने यी उपन्यास मन नपर्लान् तर थ्रिल रूचाउनेहरूका लागि भने रोचक अवश्य छन् ।
यो सूचीमा दिइएका फिल्महरू साहित्यमा आधारित छन् र केही चाहिँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरूबाट प्रेरित भई बनाइएका पनि छन् ।
यो एउटा कमेडी फिल्म हो । डकैती हुँदै गर्दा तपाईंलाई यसले थ्रिल मात्र होइन, हँसाउँछ पनि । एक करोड ७० लाख डकैतीको कथा यसमा छ । खासमा यो सत्य घटनामा आधारित फिल्म हो । अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाको एउटा बैंकमा काम गर्ने सेक्युरिटी गार्डले जीवनको एउटा मोडमा आएर बैंक रूँग्ने होइन, बैंक नै लुट्ने योजना बनाउँदा आइपरेका घटनाहरू रोचक पारामा देखाइएको छ ।
द ब्लिङ रिङ
सोफिया कपोला हलिउडमा सीमित राम्रा फिल्म निर्देशकमा गनिइन्छिन् । खासगरी उनका पिता फ्रान्सिस फोर्ड कपोलाको गडफादर शृंखलाका कारण दर्शकहरूले उनीबाट बढी नै अपेक्षा गर्ने गर्छन् तर सन् २०१३ मा बनेको यो फिल्म चाहिँ भेनिटी फेयर पत्रिकामा प्रकाशित एउटा आलेखमा आधारित रहेर सोफियाले यो फिल्म बनाएकी छन् र उनका पिताको वरदान यहाँ प्रयोग गरेकी छन् । रोचक के छ भने, जब सोफियाले फिल्म बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइन्, पत्रकार नान्सी जो सेल्सले पनि किताब लेखन पूरा गरिन् । अन्तिममा फिल्म रिलिजसँगै किताब पनि रिलिज गरिएको थियो ।
अच्छा, त तपाइँलाइ प्रोमो मन पर्यो ? पूरै फिल्म हेर्न मन छ ? उसो भए यहाँ क्लिक गर्नुस्ः
अगस्टे ले ब्रेटोनद्वारा लिखित यो फ्रान्सेली अपराध उपन्यासलाई सन् १९५५ मा जुल्स डेसिनले बनाएका थिए । खासमा जुल्सलाई हलिउडले कालोसूचीमा राखेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै बनाएका थिए । यो फिल्मको सबैभन्दा रोचक पक्ष चाहिँ फिल्मको अन्तिमतिर आइपुग्दा आवाजविहीन फिल्म बन्न पुग्छ । बिना आवाज, बिना संवाद, बिना पृष्ठभूमिको संगीत फिल्म अघि बढ्छ र यसले किताबले दिने रोचकताभन्दा कुनै कम गरेको छैन ।
अमेरिकन एनिमल्सलाई केही समीक्षकले निकै साधिएको फिल्मका रूपमा सूचीबद्ध गर्ने गरेका छन् । पछिल्ला केही दशकमा बनेका राम्रा डकैती फिल्ममा यो शीर्षमा पर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ । बार्ट लेटनद्वारा निर्देशित यो फिल्मको रोचक पक्ष चाहिँ सत्य घटनामा मुछिएका पात्रहरूलाई समेत यहाँ देख्न सकिन्छ । कलेज लाइब्रेरीबाट पुस्तक चोरिएको घटना र त्यसमा संलग्न मुख्य व्यक्ति एरिक बर्सुकको संस्मरणात्मक पुस्तकमा यो फिल्म आधारित छ ।
जेनिफर लोपेजजस्ता चर्चित अनुहारले अभिनय गरेको फिल्म भएकाले मात्र यो फिल्म राम्रो भएको होइन । सन् २०१५ मा न्युयोर्क म्यागेजिनमा प्रकाशित सत्य घटनामा आधारित र यसमा संलग्न नग्ननृत्य गर्ने युवतीहरूले गरेको डकैतीमा आधारित भएकाले यो फिल्म रमाइलो भएको हो । खासमा सेयर बजारका खेलाडीहरूले जब वाल स्ट्रिटमा पैसा कमाइसकेपछि राति मनोरञ्जन लिन नग्ननृत्य गर्ने मधुशालामा पुग्छन्, त्यहाँ केही युवतीले ती धनीमानीका क्रेडिट कार्ड चोर्छन् । यो फिल्मलाई केही समीक्षकले लोपेजकै सर्वोत्कृष्ट फिल्म मानेका छन् । लोरेन स्काफरियाद्वारा निर्देशित यो फिल्म एक पटक हेर्न लायक बन्न पुगेको छ ।
स्याडो एन्ड बोन
लेइग बार्डुगोद्वारा लिखित किशोर उपन्यास ग्रिसभर्समा आधारित रहेर बनाइएको स्याडो एन्ड बोनको त अहिले नेटफ्लिक्समा शृंखला नै आइसक्यो तर पहिला यो एउटा राम्रो फिल्मका रूपमा समेत बजारमा आइसकेको छ । लेखिका लेइगले शुरूमा यसका तीन वटा शृंखला लेखेकी थिइन् तर यति चर्चित भयो कि थप दुई वटा भाग लेख्न बाध्य भइन् ।
चर्चित अभिनेता बेन एफ्लेकले अभिनयसँगै पहिलो पटक निर्देशन गरेको यो फिल्म सन् २००४ मा चक होगनद्वारा लिखित प्रिन्स अफ थिभ्स उपन्यासमा आधारित छ । यो फिल्म बेन एफ्लेकले कति राम्रो बनाए भने उनले अस्करमा नामाङ्कनसमेत पाएका थिए ।
द फस्ट ग्रेट ट्रेन रोबरी
सन् १९७५ मा माइकल क्रिक्टनले ऐतिहासिक कथामा आधारित रहेर द फस्ट ग्रेट ट्रेन रोबरी उपन्यास लेखेका थिए । यो वास्तविक घटनामा आधारित रहेर लेखिएको थियो । खासमा सन् १८५५ मा चार जना युवाले लन्डनबाट पेरिस लैजाँदै गरिएको रेलमा रहेको २०० पाउन्ड सुन कसरी चोरे भन्ने कथामा यो फिल्म बनेको छ । माइकललाई यो कथा यति मन पर्यो कि पछि उनैले फिल्म निर्देशन गरे । सिन कनरी, डोनाल्ड सदरल्यान्ड र लिज्ली एन डाउनले अभिनय गरेको यो फिल्मको प्रभाव कस्तो रह्यो भने पछि सोही फिल्मलाई इन्डियामा रिमेक गरिएको थियो, जसमा धर्मेन्द्रजस्ता कलाकार थिए ।
किलिङ देम सफ्ली
सन् २०१२ मा क्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शन गरिएको ब्राड पिट अभिनित यो फिल्म डकैतीमा आधारित भन्दा पनि डकैतीपछिको घटनामा आधारित छ । सन् १९७४ मा बजारमा आएको अपराध उपन्यास कोगन्स ट्रेडमा यो फिल्म आधारित छ । तर फिल्मलाई सन् २००८ को अमेरिकी फाइनान्सियल क्राइसिस र बाराक ओबामाको चुनावी दौडमा आधारित बनाइएको छ ।
डकैतीको रमाइलो पक्ष के छ भने कथा लेख्दै जाँदा तपाईंले यसमा जस्तो पनि ट्वीस्ट हाल्न सक्नुहुन्छ । सन् २०१७ मा क्वाइन हेइस्टलाई नेटफ्लिक्सले बनाएको हो । यो सोही नामको किशोर उपन्यासमा आधारित छ ।
द हट रक
डोनाल्ड इ. वेस्टलेकको अपराध उपन्यास द हट रकमा आधारित फिल्म हो यो । भरपूर हास्य मिसिएको यो उपन्यास निकै रूचाइएको हुनाले यसको मूल पात्र जोन डर्टमन्डर यति लोकप्रिय भयो कि पछिका १४ उपन्यास र ११ छोटा कथामा समेत यो देखा परेको छ ।
त्यसो त यीबाहेक अन्य फिल्महरू पनि कम रोचक छैनन् । जस्तो, द ओल्ड म्यान एन्ड द गन, पे ब्याक, कटन कम्स टु हर्लेम, आर्टेमिस फउललाई पनि तपाईंले फुर्सदमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
किताबमा आधारित फिल्म
हेनरी जेम्सको चर्चित उपन्यास ‘डेइजी मिलर’ शृङ्खला १५